सियोना श्रेष्ठ दिइयो महँगो २५ करोडको औषधि, तर शरीरमा देखियो साइड इफेक्ट, राखियो आईसीयूमा – Sapana Sanjal
July 25, 2021 210
Sapana Sanjal : एउटै औषधि कतिसम्म महँगो होला ? सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि बास्तविकता हो– जोल्जेन्स्मा नामको औषधिलाई २१ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर (२५ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) पर्छ। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) रोगका लागि यो दिइन्छ। भैरहवाकी २२ महिने सियोना श्रेष्ठ उक्त औषधिबाट उपचाररत छिन्। यी सानी नानीको महँगो उपचार यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ। एलिना गुरुङ श्रेष्ठ र डा. सन्दिप श्रेष्ठकी छोरी एलिनाको दुबईमा उपचार भइरहेको छ।
Prevविजय शाहीले ९०० बिद्यार्थीबाट ४५ लाख उठाएर ठ,गेको अर्को प्रमाण भेटियो,फोन गर्दा यस्तो ल,फडा हेर्नुहोस भिडियो
Nextकुवेतमा एक महिला र दुईजना पुरुषको मृत्यु